Top 10 ihe ịzụta Abacre Ihe ndekọ ego
Dị ka Ụlọ nkwari akụ nwe, ị ga-enwe ihe ịma aka nke nnukwu mpi na nkwari akụ na ụlọ ọrụ. Olee otú mma igbo ahịa? Olee otú ọsọ azụmahịa gị ọzọ rụọ ọrụ nke ọma? Olee otú na-mkpebi kasị mma? The gburugburu nke nchegbu bụ nnukwu. Abacre Ego nkịtị Register obụp ị ngwọta nke nwere ike inyere buru ihe ịma aka a.
Ị nwere ike azọpụta oge na ego site ịzụ Abacre Ego nkịtị Register ahịa ngwọta.
Ị nwere ike dochie akwụkwọ ntuziaka na-ewe oge aga eme site na akpaaka na Abacre Ego nkịtị Register ahịa ngwọta.
Ị nwere ike nyochaa azụmahịa gị ọrụ site zuru ezu ọnụ ọgụgụ akụkọ na-enye Abacre Ego nkịtị Register ahịa ngwọta.
Ị nwere ike ewu azụmahịa gị mkpebi na ezigbo oge ezi ozi na-enye site Abacre Ego nkịtị Register ahịa ngwọta.
Ị nwere ike jikwaa rụọ ọrụ nke ọma ọtụtụ ngwaike ngwaọrụ dị ka tiketi ebi, ego drọwa, akara ngosi (osisi), ihuenyo mmetụ, barcode na-agụ (mmanya koodu nyocha) site ịtọlite Abacre Ego nkịtị Register ahịa ngwọta.
Ị nwere ike iri uru nke integral usoro na n'ihu na azụ ọrụ nke Abacre Ego nkịtị Register ahịa ngwọta.
Ị nwere ike ndenye ọpụpụ ebu ọnụ onye ahịa ahụmahụ na-anapụta mma ọrụ site na iji Abacre Ego nkịtị Register ahịa ngwọta.
Ị nwere ike segriget ndị a chọrọ n'aka gị ọrụ iji belata mpụ site n'itinye nche parameters nke Abacre Ego nkịtị Register ahịa ngwọta.
Ị nwere ike ahapụ gị nkwari akụ ahụ na-arụ ọrụ n'okpuru nchịkwa na Abacre Ego nkịtị Register ahịa ngwọta.
Ị nwere ike hazie ego imewe nke Abacre Ego nkịtị Register ahịa ngwọta.